အဆိုပါနတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ဖိအာ | Apg29
အဆိုပါနတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ဖိအားဆိုးသောဝိညာဉ်သည်ကမ္ဘာမှ emanates တဲ့အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ဘုရား၏စိတ်ဝိညာဉ်အားအကဲဖြတ်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုမကြာခဏဒီဖိအားမျိုးမခံစားရခဲ့အဖြစ်တိုက်ရိုက်ခရစ်ယာန်, ။ ငါငါ့ဝိညာဉ်အတွက်အလွန်အထိခိုက်မခံဖြစ်၏ငါသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပုံကိုသက်သေခံနိုင်ပါတယ်။
ငါမြို့ပေါ်မှာထွက်သွားလျှင်, ငါသည်သူမ၏အတွင်းအအေးနှင့်ပြင်းစွာသောအဝိညာဉျကိုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်။ ထိုအခါငါအဲဒီလူကိုမှငါ့ကိုမှမစင်ကြယ်သောကြောင့် "Puff" ကဲ့သို့ခံစားရသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက် - ငါပျော့နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်လျှင်လူတစ်ဦးကနေချိုတဲ့စမ်းချောင်း puffs ။
တစ်ခါတလေ Systembolaget ကျော်လွန်သွားပြီနှင့်အရက်များပုလင်းထဲကနေနတ်ဆိုးအင်အားသုံး breather လူသိများကြသည်။ ကျွန်မကိုလည်းဆေးရွက်ကြီးမီးခိုးများနတ်ဆိုးအာဏာကိုငါသိ၏။
ငါ့ကိုဆန့်ကျင်တီဗီ Puff ညစ်ညူးတပ်ဖွဲ့များအပေါ်တစ်ဦးလည်ချောင်းနာ ​​program ကိုဒြပ်စင်လည်းမရှိတဲ့အခါ။ ထိုကြောင့်ငါဆိုးများနှင့်အဖျက်ဘယ်တော့မှအစီအစဉ်များ။
programming အချိန်ဇယားများတွင်ကြိုတင်အစီရင်ခံစာပုံမှန်အားဖြင့်ကြောင်းညစ်ပတ်ယရှေုကမိမိအဖိုးတန်အသွေးနှင့်ဆေးကြောသည်ဟုကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျတတျနိုငျသဒြပ်စင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, ငါသည်ငါ့မျက်စိပိတ်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုမြင်လျှင်နှင့်ကြားနာရှောင်ရှားရန်သူမ၏နားကိုကိုင်ထားပါ။
ငါစာတ element တွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ, နတ်ဆိုးမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုဂီတခံစားရတယ်။ ငါကဒါကြောင့်လည်ချောင်းနာခံစားရဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဲ့သို့သော "ဂီတ" ကိုနားမထောငျဘူး။ ငါယေဘုယျအားဖြင့်ရော့ခ်ဂီတနဲ့တူမကျင့်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအမှတ်တမဲ့ကြားခဲ့ကြပေမယ့်သူကဆန္ဒရှိပါတယ်။
တချို့ကအချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မစက်ဘီးသူခိုးပြောင်းရွှေ့ပေါ်မှာနေရာ၌နေ၏။ ငါနထေိုငျရှိရာအဆောက်အဦးအပြင်ဘက်ကို set up ဖူးသောငါ့စက်ဘီး, လုယက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ငါမှန်ကန်စွာသတိရလျှင်, စက်ဘီးသော့ခတ်ခဲ့ပေမယ့်နေဆဲခိုးယူခံခဲ့ရသည်။
ငါကောင်စီစကားကိုနား ထောင်. , ငါ့စက်ဘီးရှာဖွေပန်းခြံသို့သွားကြ၏။ ငါနေရာတိုင်းရှာဖွေနေန်းကျင်သွားလေ၏။ Entertainment ကအဆိုပါဖြစ်ရပ်များကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်လူတွေပန်းခြံကျန်ရစ်ခဲ့ပေမယ့်ငါဝိညာဉ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များကာလအတန်ကြာသောငါ၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခိုင်ခံ့ခံစားရတယ်။ ဒီလိုတစ်ဦးကျောချမ်းဖွယ်လေထုခံစားခဲ့ရသညျ။
ငါဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်အခြားဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာနေရာများတွင်ကာမဂုဏ်, အဖြစ်အပျက်ကခုန်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံသို့သွားရောက်နိုင်မည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ ငါအဲဒီမှာဖြစ်ကြံ့ကြံ့ခံကြပြီမဟုတ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောညစ်ပတ်ခြင်းနှင့်လည်ချောင်းနာလေထုတွေ့ကြုံခံစားမယ်။
အခုတော့ငါနတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များထံမှဖိအားဝေါဟာရများအတွက်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြအဆိုးဆုံးဖို့သကျသခေံချင်တယ်။ ငါအပြင်ဘက်ကြုံတွေ့နှင့် Mora အိမ်တော်၌ Vasaloppet ၌တည်၏။
အဆိုပါ Vasaloppet ၏အိမ်တော် Vasaloppet တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်၏ bytardagar ခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူ့သူတို့ကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်းရှိနှင့်လဲလှယ်ထိုင်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကသူရောင်းမယ့်ခဲ့သည်တချို့ရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါ Vasaloppet ၏အိမ်သို့သူနှင့်အတူသွားလေ၏။ ကျနော်တို့အပြင်ကအခန်းတံခါးဝ၌ရပ်နေကြ၏သကဲ့သို့ငါသည်အဘယ်သို့တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးစိတ်ဓါတ်များအောငျနိုငျကဒီမှာကြောင်း 'ခံစားခဲ့ရနှင့်စဉ်းစားမိတယ်။ "
ကျနော်တို့အခန်းထဲသို့ဝင်သောအခါအကြီးမားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်နတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များထိုး။ အားကြီးသောလူသားရဲ့လူတစ်ဦးနောက်ပြန်ငါ့ကိုတွန်းတူသောဒါဟာခံစားရတယ်။ ငါသည်သူ၏ချိန်ခွင်လျှာဆုံးရှုံးဖို့အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်နီးပါးကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်။
သို့သော်ထို့နောက်နတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များဆန့်ကျင်နေတဲ့တန်ပြန်သကဲ့သို့ငါ့ကိုအတွင်းအားကြီးသောတန်ခိုး၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် step ။ ငါသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရုပ်သိမ်းနှင့်သယ်ဆောင်ခံစားရတယ်။
ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်လောကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကို။ ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်အတူဆော့ကစားရန်ချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။ ငါတကယ်အတွေ့အကြုံကိုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သငျသညျထိနျးသိမျးခံရဖို့ကာကွယ်မှုယရှေု၏အသွေးသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တိုက်ရိုက်နှင့်ပြည့်စုံလိမ့်ရန်ရှိသည်။
ယရှေုသညျဒုစရိုကျ၏တန်ခိုးရှုံးခဲ့သည်။ သူကအောင်ပွဲကိုခံနှင့်ဒုစရိုကျအင်ပါယာရဲ့အစိုးရသောမင်းတို့စက်များကိုသိရသည်။ သူကမြွေရဲ့ခေါင်းကိုဖိမိပြီးအလျှင်းမှမာရ်နတ်၏တနျခိုးဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိခိုင်မာစေခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်တတ်၏သောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏:
"ချစ်သားတို့, သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌သောသူထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်သူတို့အပေါ်မှာနိုင်ကြပါပြီ" (1 ဖြစ်မှု။ 4: 4) ။